Jwxo-shiil: Adeereey Waan ku Baryahayaaye I Cafi! – Rasaasa News
Dec 17, 2010 dambiile, Eritrea, ethiopia, Jwxo-shiil, Jwxo-shiil: Adeereey Waan Baryahayaaye I Cafi!, Ogaden, ONLF, peace in ethiopia, peacen in Ogaden
Jwxo-shiil, oo qoomamo ka taagan faduushii ONLF soo dhexgalisay, cafisna eega uun weydiistay Marwadii M.S.Dolal, xili ay ka soo wareegatay dilkiisi labo sano, isaga oo leh wixii dhacayba waan ka xumahaye i cafiya.
Warar xog ogaal ah oo aan ka helayno dalka Ingriiska ayaa waxay sheegayaan in uu Jwxo-shiil, telephone u diray qoyska reer M. S. Dolal, isaga oo waydiisanaya in ay cafiyaan, wuxuu yidhi Dr. Dolal wuxuu ahaa saaxiibkaygii shaqada siiyey. Intaasi markuu yidhi waa lagu dhigay telefoonka, Beenaale!
Waxaa, wax lala yaabo ah in mudo labo sano ah ka dib uu Jwxo-shiil, cafis weydiisto Marwada uu ninkeedii dilay labo sano ka hore isaga oo ku inkiray telefeshin ay Somali oo dhan daawanaysay, balse dadkii telefeshinka fiirsanayey habeenkaas ay yidhaahdeen waa dambiile.
Warar hoose oo aanu ka helay TV Universal, ayaa waxay sheegayaan in Jwxo-shiil, uu ku yidhi wariyihii waraystay waad i ceebayseen, waadna i kashifteen, wariye Cabdisalan waxaa laga helay in uu isla habeenkiiba ka qaatay warkii laga duubay ku celisna uu u diiday. Wariyaha ayaa waydiiyey Jwxo-shiil, maxaad gabadha u qancin weyday, wuxuuna ku yidhi ma qancin karo.
Waxaa isweydiin leh, sababata keentay in uu Jwxo-shiil, xiligan doono cafis, waxaana loo qaadan karaa in uu Jwxo-shiil, cidla fadhiyo oo aanay maanta jirin wax difaacayaa, uuna doon doonayo in ay cafiyaan qoyskii uu dambiga ka galay. Waxaa isweydiin leh hadii ay cafido marwada M.S. Dolal, ayaa ka cafiyi dambiyadii faraha badnaa ee uu ka galay dadweynaha Somalida Ogadeeniya si gaar iyo si guudba.
Waxaa dhawrtaa listada dambiyada uu ka galay dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waxaa laga yaabaa in liistadaas aad ku aragto dad ehelkaa ah. Ogadengenocide.Blog. dhawr Linka geeska midig.
Waxaa dhab ah in Jwxo-shiil, maanta cid cafin kartaa ayna jirin dhimasho iyo nolol midna [waayo haduu dhinto xitaa Ebahay kama cafiyi karo xaq dad uu dilay].